लातोँ का भूत बातोँ से नहीँ मान्ता !
Aakar November 11, 2010
विगत केही महिना देखि, हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री छान्ने नाटक भइरहेको छ । अब त्यो नाटक पनि नौटंकी भइसक्यो, अनि नौटंकी पनि धेरै नै भयो । ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भन्याजस्तो, तिनीहरु का नौटंकी ले आजित भइसकियो, दिक्क भइसकियो । प्रधानमन्त्री का एक्ला उम्मेदवार ले १२ पटक सम्म निर्वाचन मा भाग लिएको सम्म थाहा छ तर हिजो गाइँगुँइ सुनेको, अब १७ औँ पटक को निर्वाचन पो हुँदै छ रे !
ठूला दल भनाउँदाहरुलाई मादल झैँ बजाए ठिक हुन्थे कि ? न हात्तिवन ले केही लछारपाटो लायो, न गोकर्ण ले नै केही लछारपाटो लायो ! अब मन नै नमिलेपछि, गोप्य वार्ता भन्दै मा सबै कुरा मिल्ने हैन क्यारे ! हैन, किन हामीलाई गोप्य वार्ता को निहुँ गरेर, उल्लु बनाइरहेकाछन्, यी पाजीहरुले । कति न, देश को अवस्था प्रति चिन्तित भए जस्तो नि देखाउँछन्, अनि सहमति त हरदम भन्छन् । हिजो पनि गोकर्ण मा सहमति गर्नु चाँहि पर्छ, तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाँडै टुंगो लगाइनेछ भन्ने सहमति भो रे !
हुन त लाज पचेपछि, शरम नलागेपछि, जे भने नि भो, जे गरे नि भो । जनताप्रति र देशप्रति उत्तरदायी भएको भए न सोच्थे, देशको हित मा ! अब कहाँ उनीहरु को नजर प्रधानमन्त्री को कुर्सी मा छ, अनि के का हुन्थ्यो सहमति ! ३ वटा दल ले कुर्सी का खुट्टा आफूतिर तानिरहेकाछन्, अनि उता अर्का बार्गेनिङ गर्न पल्केका, क्षेत्रीय राजनिति गर्ने मधेशवादीदल भनाउँदाहरु पनि आफ्नो अनुकुल खोजिरहेकाछन् ।
संविधान बनाउने म्याद अस्ति नै सक्कियो, देश प्रति र संविधान प्रति अत्यन्तै चिन्तित भए जसरी, रातभर बसेर संविधान सभा को म्याद थपेर छाडे । ए ! अब त घैटोँ मा घाम लाग्यो होला भन्ने सोचेको, के का हुन्थ्यो, उनीहरु ले त प्रधानमन्त्रीलाई पो दागा धरे । प्रधानमन्त्री को कुर्सीका लागि माओवादी ले ९ दिन सम्म त नेपाल नै बन्द गर्यो नि । अनि गफ पनि यति दिए कि, प्रधानमन्त्री ले राजिनामा दिएको २ मिनेट भित्र सहमति गर्छौँ । आपुताली परेर मोज गरिरहेका, प्रधानमन्त्री ले सजिलै के कुर्सी छाड्थे । आफ्नै पार्टि का अध्यक्ष ले समेत, अत्ति गर्ने थालेपछि, प्रधानमन्त्री ले राजिनामा त दिए तर अचम्म ४ महिना सम्म पनि, कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएर बसेका छन् । उनको काम भनेको, उद्घाटन गर्ने, रिवन काट्ने, लौ सहमति गरेर देखाओ भन्ने भाषण गर्ने ।
गिरिजाबाबु बितेको १ वर्ष पनि भा’को छैन । देशमा १६ पटक प्रधानमन्त्री को चुनाउ भइसक्यो, ४ महिना काम चलाउ सरकार ले काम गरिसक्यो, बजेट निष्काशन भएन, माओवादी तथा देशका प्रधानमन्त्री र राष्र्टपति २-३ पटक विदेश घुमेर आइसके । अरु त के भन्नु, गोप्य वार्ता नि २ पटक सहमति गर्नुपर्छ भन्दै टुंगिसक्यो । चाहे जो सुकै ले, गिरिजालाई जे भनुन् तर उनको कमि त अहिले सबैले महशुस गरेकै छन् । सायद, उनी अझै भएको भए यस्तो त हुँदैनथियो होला भनेर, अड्कल काट्नेहरु प्रशस्त छन् । गिरिजा भलै, कांग्रेसलाई एकलौटि चलाउने मान्छे हुन् तर उनी राजनितिक खेलाडि चाँहि पक्का थिए । सबै दलका नेताहरुलाई ‘हराबरा’ खेलाएर जसरी नि सहमति मा गिरिजा ले ल्याउँथे । भन्दा फरक नपर्ला, गिरिजा को दाजोँमा अहिले का सबै नेताहरु ‘नपुंसक’ नै रहेछन् । प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ, रामचन्द्र सबैका तुजुक देखिसकियो, जति नै मच्चिएपनि, पिंङ ठाउँको ठाउँमा नै छ ।
तुलोमा राखेर जोख्ने हो भने कोही घटिबढि त छैनन्, नौटंकि गर्न, चाप्लुसी घस्न, चिल्ला कुरा गरेर जनतालाई चिप्ल्याउन सबै माहिर छन् । यही मध्ये पनि, झलनाथ खनाल उर्फ झल्लु, एउटा स्ट्यान्ड लिन नसक्ने नेता रहेछन् । हुन त यसैपनि, झालेमाले एमाले अनि झल्लु भनेर, उनको दोहोलो काढ्ने गरिएको छ । अझ ति छन् नि, प्रचण्ड भन्ने पुष्पकमल दाहाल । उनको जुँगा, अनि उनको पर्सनालिटि हेर्ने हो भने, त्यस्तो नेता पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो तर के गर्ने, बुद्धि भने १ पैसा को रहेनछ । आफ्नै पार्टिबाट अरुलाई माथि उठ्न नदिने, गौरवशाली पार्टि र घेराबन्दी भन्न पनि कहिले नछोड्ने भए । उता त्यस्तै हालत छ, रामचन्द्र र शुशिल कोइरालाहरुको ।
३ वटा दल का ३ थरि अडान छन् । ३ वटैलाई प्रधानमन्त्री को कुर्सी चाहिएको छ । सहमति गर्ने राग अलापिरहेकाछन् । ‘लातोँ का भुत बातोँ से नही मान्ता’ भनेजस्तो, यिनिहरु ले लात नै खोजेका हुन् कि ? या अर्को कुनै देशका राजदुत, विदेशमन्त्री या प्रधानमन्त्री आएर कुर्सी को भागवन्डा लाइदिन्छन् भनेर निहुँ खोजेर बसेका हुन् कि ? कुरो यसरी मिलाउँ न त ! सबैभन्दा अगाडि राष्टपति छँदैछन्, बाँकि ३ दलका लाई ३ वटा प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ, आखिर पहिले पनि २-३ जना उप-प्रधानमन्त्री बनाइएकै थिए क्यारे, यो पटक ३ वटा प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ ।
हे पशुपति ! यो नौटंकिलाई कम गर्ने या बन्द गर्ने उपाय यसो बताइदेउ न ! कि सबैलाई भौतिक कारवाही नै गर्नुपर्ने हो, जनताहरु मिलेर ! लौ, अब हामी पनि गोप्य छलफल मा लाग्नुपर्ला जस्तो छ है, हे पशुपति ! हामी नि गोप्य वार्ता मा बसौँ न, मृगस्थली तिर !
कार्टुन: रविन सायमी
Nilambar November 11, 2010 at 9:45 AM
Cartoon is awesome. nice work Rabin.
anuma bhattarai November 11, 2010 at 1:13 PM
Love this post ... cartoons are amazing :)
Krishna November 11, 2010 at 10:10 PM
Krishna K shrestha"Kals" November 12, 2010 at 3:58 AM
Nilambar November 12, 2010 at 3:58 AM